Vaovao momba ny OnePlus: fandefasana, finday, root ary maro hafa - Androidsis | Androidsis
OnePlus dia mpanamboatra finday naorina any Shina. Izy io dia iray amin'ireo orinasa vao haingana indrindra amin'ny Android, izay natsangana tamin'ny taona 2013. Izy ireo dia natokana indrindra amin'ny famoahana finday avo lenta, na dia miasa amin'ny vokatra hafa toy ny fahitalavi-dry zareo ihany aza. Izy io dia marika iray mifantoka amin'ny fandefasana telefaona ao anatin'ny faritra avo lenta.
OnePlus dia miavaka amin'ny paikadiny handefasana telefaona vitsivitsy isan-taona (matetika roa). Modely sasantsasany izay misongadina amin'ny famaritana tsara sy ny vidiny mirary ao anatin'ny faritra misy azy ireo. Eto ianao dia ho afaka hahita ny vaovao, ny vaovao ary ny hevitra momba ny telefaona OnePlus miaraka amin'ny Android ho toy ny rafitra miasa.
ny Aaron Rivas hace 4 volana .
OnePlus dia namoaka ny findainy roa vaovao OnePlus 9 andiany roa ho toy ny sainam-pirenena voalohany ...
Ny fanantenana manodidina ny OnePlus 9 dia avo, fa tsy ho an'ny tsy misy. Miresaka momba ny sambo manaraka ...
Isaky ny taranaka vaovao misy finday avo lenta, lehibe kokoa ny fitakian'ny mpampiasa eo amin'ny sehatry ny sary, antony ...
OnePlus dia manolotra fanavaozam-baovao lozisialy vaovao amin'ny telefaona findainy marobe. The OnePlus Nord, mandritra izany, ...
Mety ny 9 martsa izao raha manamafy ny fanombohana ny andiany OnePlus 9 ho an'ny ...
OnePlus dia namoaka fanavaozana rindrambaiko vaovao ho an'ny OnePlus Nord izay tonga ho OxygenOS 10.5.11. Tonga amin'ny ...
ny Nerea Pereira hace 5 volana .
Ny marina dia ireo famoahana mifandraika amin'ny OnePlus 9 sy OnePlus 9 Pro dia tsy mijanona amin'ny fahatongavany. Fantatsika fa ...
Isaky ny misy fiovana eo amin'ny tontolon'ny telefaona, mandritra ny volana voalohany (ka ...
Betsaka ny tsaho miresaka momba ny toetra sy ny mombamomba ny manaraka OnePlus 9. Maro amin'ireo…
Ny OnePlus 8, 8 Pro ary 8T dia mahazo fonosana firmware vaovao izao izay tonga tahaka ny ...